रियल सिटिओ र भिल्ला डे अरन्जुएजका लेखकहरू द्वारा books पुस्तकहरू। पहिलो वितरण | वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | लेखकहरू, किताबहरु, नोभेला, रोमान्स उपन्यास, कथाहरू
म बसिरहेको छु अरानजुज। रियल सिटिओ y भिल्ला डेल सुर मैड्रिडको समुदाय को एक हो सुन्दर सहर एक शहर को सबै आकर्षण संग, एकै समयमा, इतिहास र कला oozes तपाईं जहाँ जानुहुन्छ। र यती धेरै कलाको साथ राम्रो कथाको अभाव छैन र लेखकहरू तिनीहरूलाई गणना गर्न। आज, एक मा पहिलो डेलिभरीम केहि मा एक नजर लिन्छु समकालीन रिवरसाइड वा बस्ने लेखकहरू र आफ्ना पुस्तकहरु। र म अवसर लिन्छु सबैलाई Aranjuez भ्रमण गर्न आमन्त्रित गर्नुहोस्.
1 जोस एन्टोनियो लोपेज मदिना
1.1 Aranjuez को शानदार किंवदंतियों
2.1 अन्तिम अध्याय
2.2 हेर्न हिम्मत
3 डेभिड एफ। Canaveral
3.1 फोर्टुना सिटी II। काठ क्लोभर
4 मर्सिडीज सान्तोस
4.1 रहस्य र खरानी
4.2 बोक्सी शिकार
जोस एन्टोनियो लोपेज मदिना
यो लेखक जन्म मैड्रिड en 1985 es पूर्व सम्भ्रान्त एथलीट। सेवानिवृत्त पछि, उनले एक लेखकको रूपमा यसको सपना पूरा गरे पहिलो किताब त्यो तपाईंको निवास शहर मा सेट गर्दछ।
Aranjuez को शानदार किंवदंतियों
छोरा XNUMX छोटो र रहस्य र डरावनी का शानदार कथाहरू, यद्यपि तिनीहरू वास्तविक घटनाहरूमा आधारित छैनन्। यसको स्रोत दन्त्यकथा र कथाहरू हो जुन समयसँग लेखिन्छ कि लेखकले पुन: कल्पना गरेको वा सिर्जना गरेको छ। उदाहरण को लागी, एक स्कटिश कथा छ कि López मेदिना मेदिनासेली डे Aranjuez को दरबार मा अनुकूल छ। खैर, उहाँ हामीलाई सिकाउनुहुन्छ धेरै प्रतीकात्मक स्थानहरू शहर बाट। साथै, पुस्तकको अन्तमा, हामी अरूलाई पनि भेट्छौं सोह्र सेक्सन जहाँ लेखक बताउँछ कि यो कहाँ बाट आयो विचार, आधार स्रोतहरू वा यदि कहानी तपाईंको कल्पनाको फल हो भने।
उहाँ मा जन्मेको थियो मैड्रिड en 1963 y Aranjuez मा बस्नुहुन्छ। उनीसँग भूगोल र इतिहासमा डिग्री छ र यसैले कार्य गर्दछ प्रोफेसर मास्ट्रो मटास ब्रावो डे वाल्डेमोरो माध्यमिक शिक्षा संस्थानमा।
जस्टिना तपाइँको जीवन कसरी पूर्ण रूपले बisted्गाइएको छ हेर्नुहोस् केहि चित्रहरू बेच्न अस्वीकार गर्नुहोस् रोमनस्क्व जुन सहरमा सम्बन्धित छ जहाँ उहाँ जन्मनुहुन्थ्यो र बस्नुहुन्थ्यो। यसैले तपाईंले छोड्नुपर्नेछ, निष्कासित। उनी आफ्ना बच्चाहरूलाई फेरि हेर्न चाहन्छन्, तर तिनीहरूले उनलाई अस्वीकार गरे किनभने उनीहरू विश्वास गर्छन् कि तिनीहरू परित्याग गरिएका छन्। उपन्यास जारी छ संग एक परिवार को तीन पुस्ता को इतिहासजुन एक हर्मेटेज द्वारा चिह्नित गरिएको थियो, सान बाउडेलियो डे बर्लान्गा, तपाईंको चित्रहरु र यसका मानिसहरू।
यो पुस्तक बनेको छ तेह्र कथाहरू जुन तेह्र उत्तेजक कथाहरू भन्दछन् उनीहरू काममा प्रेरित भएको संक्षिप्त टिप्पणी अगाडि। कला देख्ने अर्को तरिका बरु यसको अध्ययन वा दिखावा बिना यसको मजा लिने। यसको परे हेर्नुहोस्, वा त्यो कथा जसरी हाम्रो ध्यान चाहान्छ ता कि हामी यसलाई देख्न सक्छौं।
डेभिड एफ। Canaveral
मा जन्म मैड्रिड en 1983 Aranjuez मा बस्ने। उनी दुबै वास्तविक र काल्पनिक कथाहरूबाट मोहित भए र धेरै पुस्तकहरू प्रकाशित गरिसकेका छन्।
फोर्टुना सिटी II। काठ क्लोभर
फोर्टुना शहर यो एक छ रहस्य र कल्पना श्रृंखला कि भाग्य द्वारा शासित दुनिया प्रस्तुत। तर नायक, अलेक्ज्याण्डर बर्केल, यो एक जिन्क्स बाहिर जान्छ। क्रिस्टल पासा यो पहिलो खण्ड थियो जसमा अलेक्ज्याण्डरले केहि मृत्युको बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो।
काठ क्लोभर उही हो र दोस्रो खण्ड श्रृंखला को शुरू र शुरू हुन्छ सात महिना अघिल्लो पछि यो समय अलेक्जेन्डर सामना गर्नुपर्दछ परिणामहरू ती घटनाहरूको, तर तिनीहरूको अवस्था पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छ। र यसका साथै उसले आफ्नो अनुसन्धान जारी राख्छ पहिचान र यसको बाल्यकाल हराएको
पत्रकारिता दुबै लिखित र रेडियो प्रेस मा। यो भन्दा बढी पन्ध्र बर्ष पत्रिकाको म्याड्रिड क्षेत्रीय सेक्सनमा देश, र यो भन्दा बढि पच्चीस बर्ष en रेडियो। यो त्यहाँ थियो जहाँ उनले आफ्नो शहरको स्थानीय रेडियो स्टेशन मा आफ्नो रेडियो क्यारियर शुरू गर्नुभयो, अरानजुज.
रहस्य र खरानी
2012 बाट। उसको थियो पहिलो उपन्यास प्रकाशित भयो, जुन हामीलाई शताब्दीमा लाग्छ XVIII र हामीलाई कथा बताउँछ Ulloa बाट Carina, जसको जीवन एक पत्र प्राप्त पछि परिवर्तन हुनेछ। उनको बुबा, एक नाविक थियो रोयल नेवी नयाँ ग्रेनाडाको विकरयल्टीको लागि नियत, उसलाई भेट्न उसलाई सोध्छ कार्टाजेना डे इण्डियस। उनको लागि पर्खिरहेको छ fortuna काकाओ बगैंचामा र कुलीन तल आऊ जससँग विवाह गर्न। तर त्यहाँ पुग्दा उनीहरूले उनलाई बताए कि उसको बुबा हुन् हत्या गरियो र उनको मंगेतरले अर्को बिहे गरे।
Carina त्यसपछि पत्ता लगाउनेछ उसको बुबाको छायादार व्यापार र तस्करी व्यापक छ कि अवस्थित छ। को जलवायु पनि युद्ध त्यो क्यारिबियन भर स्पेन र इ England्ल्यान्डको बीचमा बस्दछ। र तपाईं पनि एक पाउन सक्नुहुन्छ सौतेनी बहिनी mulatto द्वारा पीछा गरियो अन्वेषण। त्यसो भए क्यारिना भेट्नेछन् डिएगो डी Veranz, एक कुलीन एउटा अपराधको आरोपमा शहरबाट हटाइयो। तर डि Veranz, वास्तवमा, गोप्य रूपमा काम क्राउन को लागी र उसलाई मदत गर्न चाहान्छ। दुबै बदला लिन्छन्, तर अप्रत्याशित छैन: जोश।
मा पोष्ट गरिएको 2016 अर्को हो वास्तविक घटनाहरूमा आधारित ऐतिहासिक उपन्यास सेट र त्यो हामीलाई 1608 मा लाग्छ। एक समस्यापूर्ण केटी को फिर्ती जुगारामुर्दी का कारणले घटनाहरूको श्रृंखला दिन्छ बोक्सीविद्याको लागि थप परीक्षण इतिहासको र त्यहाँ भएको अविश्वसनीय वाक्यमा।
त्यहाँ सबै छ: covensबहादुर गाउँले Bonfires क्र्याकल्स, orges, मूर्तिपूजक संस्कार, जादूगर, प्रकोप, गुटहरू, Magia, अन्धविश्वास, यातना रैक, edicts सुन्दर, उज्यालो वकीलहरु... र को एक इतिहास निषिद्ध प्रेम.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » रियल सिटिओ र भिल्ला डे अरन्जुएजका लेखकहरूले books पुस्तकहरू। पहिलो वितरण
जेसी फरामुन्ताना भन्यो
यदि केवल स्व-हितको लागि मात्र हो भने पनि - म फर्रामुन्टाना थप्न चाहन्थें, जसले गत वर्ष २ पुस्तकहरू प्रकाशित गरेका थिए: रिबेरियोस र मेस्टिजो सपना। Aranjuez Bookstore मा उपलब्ध छ।
JC Farramuntana लाई जवाफ दिनुहोस्
जूलियस सीजरको बारेमा7पुस्तकहरू उनको जन्मको वार्षिकोत्सवमा